via - Synonyms of via | Antonyms of via | Definition of via | Example of via | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for via
Top 30 analogous words or synonyms for via
တာလီမြို့ Dali has rail connections to Kunming via the Guangtong-Dali Railway and Lijiang via the Dali-Lijiang Railway. Daily train service is available to and from Kunming (1 day-train and2sleeping trains) and to Lijiang. As the railway network expands in Yunnan, train service will become available to Shangri-La County and Ruili.
ဆယ်လ်ဗီယို ဘာလူစကိုနီ Spatuzza က “ Graviano က ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကို အီတလီနိုင်ငံ Rome မြို ့၊ Via Veneto ဒေသမှ Graviano ပိုင်ဆိုင်သည့် အရက်ဘားတခုမှာ တွေ ့ဆုံစကားပြောစဉ်မှာ သူကို ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့တယ် “ လို့ ပြောကြားခဲ့ တယ်။ Spatuzza ၏ အမှုမှာ Dell'Utri က ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသူ ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများ Although the words "gas" and "giant" are often combined, hydrogen planets need not be as large as the familiar gas giants from the Solar System. However, smaller gas planets and planets closer to their star will lose atmospheric mass more quickly via hydrodynamic escape than larger planets or planets farther out.
ကျော်မင်း၊ ဦး (အိုင်စီအက်စ်) ဦးကျော်မင်းသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ထူးခွျန်၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 'The Burma We Love' 'ကွျန်ုပ်တို့ချစ်သော ပြည်မြန်မာ' (၁၉၄၅)၊ 'Through the Iron Curtain via the BacK Door' 'သံကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်မှ ဆိုဗီယက်' (၁၉၅၂)၊ 'Preliminary Report on New Industries for Burma' 'မြန်မာပြည်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်များ ပဏာမရီပို့' (၁၉၄၇)၊ 'Mein Kampf ā La Kyaw Min' 'မိန်းကင့် အလာ့ ကျော်မင်း' (၁၉၄၇)၊ 'Introducing Buddhist Abhidhamma Meditation and Concentration' 'ဗုဒ္ဓ အဘိဓမ္မာ နိဒါန်း' (၁၉၇၉) စာအုပ်များကို ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားခဲ့သော စာအုပ်မှာ ပါလီမန်တွင် ပြောကြားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ကိစ္စများဖြစ်သော 'ရခိုင်ပြည်နယ်' (၁၉၆၁) ဖြစ်သည်။
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် In order to address the inherent flight instability ofaflying wing aircraft, the B-2 usesacomplex quadruplex computer-controlled fly-by-wire flight control system, that can automatically manipulate flight surfaces and settings without direct pilot inputs in order to maintain aircraft stability. The flight computer receives information on external conditions such as the aircraft's current air speed and angle of attack via pitot-static sensing plates, as opposed to traditional pitot tubes which would negatively affect the aircraft's stealth capabilities. The flight actuation system incorporates both hydraulic and electrical servoactuated components, it was designed withahigh level of redundancy and fault-diagnostic capabilities.